५० बर्ष कट्न लागेकी ऐश्वर्या आखिर अहिले सम्म कसरी भईन फिट ? जिम पनि नजाने ऐश्वर्या रायको यस्तो छ फिटको राज » बुद्ध भूमि नेपाल
बलिउडकी सुन्दर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चनको सुन्दरताले धेरैलाई लोभ्याउँछ । ऐश्वर्याको सुन्दरताले मानिसलाई मोहित मात्र बनाउँदैन उनको सुन्दरतालाई देखेर धेरैजना अचम्मित पनि पर्ने गरेका छन् । उनी एक छोरीकी आमा पनि हुन् । उमेरले ४७ वर्ष टेकेकी ऐश्वर्या जिम पनि जाँदिनन् । तर, उनी कसरी यति फिट रहिन् ?
ऐश्वर्या एकै समयमा धेरै खाना खाँदिनन् । उनी विस्तारै विस्तारै थोरै थोरै खाना खाने गर्छिन् । जसले गर्दा खानामा भएको पोषक तत्व शरीरमा लाग्न पाउँछ । र पचाउन पनि सजिलो हुन्छ । उनी साधारण खाना खाने गर्छिन् । जसमा उमालेको सागसब्जी, दाल, रोटी र सलाद पर्छ । उनी रातिको खाना पनि निकै हल्का लिने गर्छिन् । उनी रातिको खाना पनि छिट्टो खाने गर्छिन् ।